Bulchiinsi Falasxiin wixinee maqaa karoora nageenyaa jedhuun Ameerikaan qopheessite kan hin fudhanne tahuu beeksise - NuuralHudaa
Prezdaant Traamp, wixineen “karoora nageenya baha jiddu galaa” bulchiinsi isaa qopheesse, torbee dhuftu keessa ni labsama jechuu isaa hordofuun, bulchiinsi Falasxiin gamanumaa maqaa karoora nageenyaatiin sanadii Israa’el deeggaruuf qophaahe kan hin fudhanne tahuu beeksise.
Dubbii himaan Prezdaantii Bulchiinsa Falasxiin Nabil Abu Rudeynaah dhimmicha irratti ibsa kenneen “wixineen seera addunyaa cabsuun qophaahe fudhatama waan hin qabneef, Ameerikaa fi Israa’el sarara diimaa akka hin qaxxaamurre akeekkachiisnee jirra” jedhe.
Bulchiinsi Falasxiin ibsa isaa kanaan “karoorri kun qabiyyee kanaan duraa hammatee yoo kan labsamu tahe, bulchiinsi Falasxiin mirga uumamaa fi seera addunyaatiin qabu tikfachuuf tarkaanfiiwwan fudhatu ifa ni godha; akka seera addunyaatti Israa’el qaama humnaan dachii Falasxiin qabatte waan taateef rakkoolee uumamu hundaaf itti gaafatamummaa ni fudhatti” jechuu isaa ejensiin odeeyfannoo Falasxiin gabaase.
Karoora maqaa nageenyaatiin Ameerikaan qopheessite kana keessatti, bulchiinsi Falasxiin diigamee Falasxiinonni guututti Israa’el jalatti akka deebi’an yaada jedhu kan of keessaa qabu tahuu gabaafame. Falasxiinoonni akka jedhanitti, Ameerikaa fi Israa’el karoora kana yoo kan hin dhiisne tahe marii nageenyaa yaada jedhu hunda dhiisanii biyya Falasxiin walaba taate magaalaa guddoo Al-Qudsi waliin labsachuuf kan dirqaman tahuu ibsaa jiran.
Gama biraatiin ammoo Donald Tramp karoora bulchiinsi isaa qopheesse kana irratti mari’achuuf Prezdaantii Israa’el fi hogganaa paartii mormituu Israa’el kiibxata dhufu gara Washington DC kan affeere tahuus odeeyfannoon ni addeessa.
August 4, 2021 sa;aa 12:47 pm Update tahe